dimanche, 15 septembre 2019 23:01
Canal de Pangalanes ho vitaina alohan'ny faran'ny taona: Aza tsipazana hoditr'akondro ny Filoha lehiretsy a
Ny Filoha, azoko antoka fa te hanao zavatra tokoa, ela no nifandraisako taminy, fantatro raha ny amin'izay.
Efa nomeko anao efa ela io dossier complet momba io Canal des Pangalanes io andriamatoa Filoha, jereo ny Archives nao raha sendra adinodino, fa asa ireo teknisianina manodidina anao raha mamahan-dalitra anao, fa tsy vita mora, na hoe resaka dragage, fanalana fasika amin'io machine kely nentinao io, no ahavita an'io Canal des Pangalanes io, efa vaky io canal io ary tena misy toerana tsy vitan'ny dragage na fanalana fasika fotsiny izany.
Tsy maintsy amboarina tanteraka ny berge, na ny sisiny, atao béton mihitsy aza no tena mety na atao vato, toy ny Canal de Suez, izay mifampitohy amin'io Canal de Pangalanes io ny tantarany.
Raha ny tantara nanamboaran'i Gallieni an'io Canal des Pangalanes io dia ny vokatra rehetra avy aty amin'ny faritra mamokatra atsinanan'i Madagasikara dia hivoaka ny port Toamasina, ka hianavaratra amin'ny ilabolan-tany avaratra, ka anapaka an'i Afrika, avy eo Djibouti eo avaratry Somalie, ary hivoaka an'i Egypte ery ambony Afrika avaratra, ary hiazo an'i Europe.
dimanche, 15 septembre 2019 22:54
Tonizia: Nodimandry androany ny vady navelan’ny filoha Béji Caïd Essebsi
83 taona i Chadlia Caïd Essebsi izao nindaosin’ny fahafatesana izao. Androany 15 septambra 2019, andro anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena alohan’ny fotoana ao Tonizia, hifidianana izay handimby an’i Béji Caïd Essebsi, nodimandry tamin’ny 25 jolay 2019 teo, no maty i Chadlia Caïd Essebsi.
Ny zanany no nanambara ny vaovao.
dimanche, 15 septembre 2019 22:45
Baskety – N1A: Tompondaka ny GNBC Vakinankaratra sy ny SBBC Boeny
Tontosa tetsy amin’ny Lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny tolakandro teo ny fiadiana ny tompondakan’i Madagasikara N1A.
Voahosotra ho tompondakan’i Madagasikara teo amin’ny sokajy vehivavy ny SBBC Boeny rehefa nandresy tamin’ny moka fohy, elanelan’isa ety dia ety, 53 noho 52 ny MB2ALL Analamanga.
Teo amin’ny sokajy lehilahy kosa dia tompondaka ny GNBC Vakinankaratra rehefa nandresy tamin’ny isa 67 noho 65 ny COSPN.
dimanche, 15 septembre 2019 22:44
Fanadinana BEP: Mpiadina miisa 8 577 no hiatrika fanadinana manomboka rahampitso
Hanomboka ny alatsinainy 16 septambra 2019 manerana ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara ny fanadinana Brevet d’Étude Professionnel (BEP), ary hitohy hatramin’ny alakamisy 19 septambra 2019.
Miisa 8 577 ny kandida voasoratra anarana manerana ny Nosy, mitsinjara amin’ny foibem-panadinana miisa 72.
Ho avy etsy amin’ny Lycée Technique Professionnel de Génie Civil Mahamasina ny minisitry ny fanabeazam-pirenena sy fampianarana teknika ary arak’asa, Volahaingo Marie Thérèse amin’ny fanombohan’ny fanadinana rahampitso maraina.
dimanche, 15 septembre 2019 19:30
Kitra - Coupe de la CAF 2019: TS Galaxy FC 1 # 0 CNaPS Sport
Resin’ny TS Galaxy FC tamin’ny isa 1 noho 0 ny CNaPS Sport androany, nandritra ny lalao mandroso amin’ny fiadiana ny Amboaran’ny CAF 2019, natao tao amin'ny Mbombela Stadium Nelspruit atsy Afrika Atsimo.
Baolina tokana maty teo amin’ny minitra fahatelo tamin’ny fidirana voalohan’ny lalao no nitondra fandresena ho an’ny ekipa mpampiantrano. Nisy baolina matin’ny CNaPS Sport saingy nolavin’ny mpitsara.
Eny amin'ny Kianjan'ny Cnaps eny Vontovorona ny lalao miverina amin'ny 27 septambra 2019 .
dimanche, 15 septembre 2019 17:37
Pont Mangarivotra – Toamasina: Lehilahy iray hita faty mifatotra amin’ny tendany sady mihantona
Namono tena sa nisy namono ? Vatana efa tsy misy aina, mifatotra ny tendany sady mikirozaroza ao ambany tetezana no hitan’ny olona androany maraina teo amin’ny Pont Mangarivotra.
Tombanana manodidina ny 50 taona eo ilay lehilahy.
dimanche, 15 septembre 2019 17:26
Toamasina: Nijery ny toerana hanorenana « building » i Andry Rajoelina
Hisitraka ny trano mora sy « building » mora ny mponina eto Toamasina. Hanomboka tsy ho ela ny fanamboarana ireo trano ireo, hoy ny filoha Andry Rajoelina androany 15 septambra 2019 raha tonga nijery sy namaritra ny toerana hanaovana izany teo Ambohijafy, niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny izy.
dimanche, 15 septembre 2019 17:20
Zandarimariam-pirenena: Mankalaza ny faha-60 taonany ny toby Antranobozaka-Antsiranana
Hitondra ny anarana "Toby Jeneraly Randrianasoavina" ny Tobin’ny Zandarimaria Antranobozaka Antsiranana amin’izao faha-60 taonany izao. Hatao amin’ny 21 septambra 2019 ny lanonana mahakasika izany.
dimanche, 15 septembre 2019 17:11
BEPC – Cisco Tana Ville: Hivoka amin’ny faran’ny herinandro ambony ny valim-panadinana
Mamarana ny fitsarana ireo taratasim-panadinana ny ato amin’ny fari-pifidiam-pampianarana Antananarivo Renivohitra (Cisco Tana Ville) rehefa nanomboka izany tamin’ny alakamisy 12 septambra 2019.
Raha ny tetiandro, dia hanomboka rahampitso alatsinainy ny fampidirana ny naotin’ny mpiadina anaty solosaina, arahin’ny fanamarinana. Any amin’ny faran’ny herinandro ambony any no hivoaka ny voka-panadinana BEPC ho an’ny Cisco Tana Ville.
Ny taranja fizika simia no voalaza fa nanahirana ny mpiadina, misy mihitsy mpiadina tsy niatrika taranjam-panadinana. Rehefa mahazo salanisa takiana hahafahana BEPC ny mpiadina iray dia afaka, na tsy niatrika taranjam-panadinana aza.
dimanche, 15 septembre 2019 16:52
Antsirabe: Hahazo tobim-pamokarana herinaratra avy amin'ny masoandro
Ny orinasa Witec no hanatanteraka ny fananganana tobim-pamokarana herinaratra avy amin'ny masoandro ho an’Antsirabe. Notanterahina nandritra ny « Vitrine du Vakinankaratra » teto Antsirabe ny fanaovan-tsonia ity tetikasa ity, teo amin’ny ministeran’ny Angovo sy ny rano ary ny akoran’afo sy ity orinasa ity.